जसपाका नेताको दूरदर्शिता पुगेन, मिल्न सकिँदैन भने बाटो लागौं : डा. बाबुराम भट्टराई - Sidha News
जसपाका नेताको दूरदर्शिता पुगेन, मिल्न सकिँदैन भने बाटो लागौं : डा. बाबुराम भट्टराई
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न दुईचोटि बालुवाटार गए । पेटको अप्रेशनका लागि वीर अस्पतालमा भर्ना हुनुअघि बैशाख १४ गते पहिलोचोटि । र, अप्रेसन सफल भएलगत्तै बैशाख २८ गते दोस्रोचोटि । आखिर, ओलीसँग फराकिलो बैचारिक–राजनीतिक भिन्नता राख्ने डा. भट्टराई किन गए दुई–दुईचोटि बालुवाटार ?
‘पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुको नाताले मसँग भित्री–बाहिरी सूचना प्राप्त हुन्छ, मेरो ब्रह्मले पनि देख्छ’ बालुवाटार जानुको रहस्य खोतल्दै डा. भट्टराई भन्छन्, ‘त्यही हुनाले एउटा नागरिकले आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा भन्नुपर्छ भन्ने भएर आफूले देखेको कुरा उहाँलाई राखेको हो ।’
डा. भट्टराई संलग्न जनता समाजवादी पार्टीभित्र अहिले केपी ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिल्दा तीव्र अन्तरविरोध चर्केको छ । र, यही कलहका कारण जसपाले आफ्नो भागमा आउनै लागेको प्रधानमन्त्रीको अवसर समेत गुमाएको छ ।
जसपाकै कारणले यो अवसर गुमेको हो कि भन्ने प्रश्नमा डा. भट्टराईले भने, ‘हाम्रा नेताहरुको दुरदर्शिता यहाँनेर पुगेन । तर, यो कहाँबाट भयो, रहस्यको विषय छ । हाम्रो आफ्नै मात्र बुद्धि भ्रष्ट भएर यस्तो भयो कि ? वा भूराजनीतिक भुमरी, जुन मडारिँदैछ, त्यसको प्रभाव पर्यो भन्ने त भोलि घटनाक्रमले पुष्टि गरेपछि देखाउला । तर, यो अहिलेचाहिँ रहस्यकै गर्भमा छ ।’
राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको समस्याको समाधान के हो भन्ने प्रश्नमा डा. भट्टराईको जवाफ छ– ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार ।’ अनि जसपाभित्रको समाधान के ? यसमा डा.भट्टराईको प्रतिक्रिया छ– ‘मिल्न सकिँदैन भने कचिंगल गरेर पार्टीलाई धुजाधुजा पार्नुको साटो बरु सरसल्लाह गरेरै आ–आफ्नो बाटो लाग्नु सही हुन्छ ।’